SIDA LOO UNINSTALL INTERNET EXPLORER KA WINDOWS 10 - JILICSAN
Sida loo Uninstall Internet Explorer ka Windows 10
Haddii aad tahay isticmaale Windows OS, waa wax aan macquul aheyn in aadan maqlin wax ku saabsan biraawsarkaaga caadiga ah ee Microsoft - Internet Explorer. Inkastoo Microsoft Edge waa biraawsarkaaga cusub ee u shaqeeya sidii biraawsarkaaga caadiga ah, Windows 10 ayaa wali siisa isticmaalayaasha Internet Explorer 11-kii hore ee ay ku taageerayaan mareegaha hore ee isticmaalaya tignoolajiyada hore. Si kastaba ha noqotee, isticmaalayaashu waxay jecel yihiin inay isticmaalaan daalacashada kale ee ka wanaagsan kombuyutarkooda Google Chrome , Mozilla Firefox, Opera iwm. Markaa, ma jirto wax lagu hayo browserka hore sababtoo ah waxay kaliya u horseedi doontaa isticmaalayaasha xasilloonida & dhibaatooyinka amniga. Haddii aadan u baahnayn inaad ilaaliso browser-kan, waxaad ka saari kartaa kan nidaamkaaga. Maqaalkani waxa uu ka hadli doonaa siyaabaha kala duwan ee aad uga saari karto Internet Explorer Windows 10 PC.
Habka 1: Sida loo uninstall Internet Explorer isticmaalaya Control Panel
Habka 2: Sida loo uninstall Internet Explorer isticmaalaya PowerShell
Habka 3: Uninstall Internet Explorer 11 addoo isticmaalaya Maare Features Operational
Si aad uga saarto Internet Explorer nidaamkaaga, waa inaad martaa talaabooyinkan:
1. U tag Bilow> Settings ama saxaafadda Furaha Windows + I furayaasha si loo furo Settings.
2. Guji kan Apps doorasho.
3. Hadda, ka menu-gacanta bidix, dooro Apps & sifooyinka
4. Hadda laga bilaabo daaqadda midig ee ugu badan, guji Barnaamijka iyo Tilmaamaha link hoos Dejinta la xidhiidha.
5. daaqad cusub ayaa soo baxaysa; halka dhanka bidix ee daaqada-pane, waa inaad gujisaa Daar ama dami sifooyinka Windows doorasho.
6. Iska daa Internet Explorer 11 ka dibna OK
7. Guji Haa, dabadeed dhagsii Hadda dib u bilow si loo xaqiijiyo isbedelada.
Markaad raacdo dhammaan tillaabooyinka, waxaad awoodi doontaa inaad Ka saar Internet Explorer ka Windows 10.
Hab kale oo looga saaro Internet Explorer 11 ka Windows 10 waa iyada oo loo marayo PowerShell. Si taas loo sameeyo, tillaabooyinka aad u baahan tahay inaad raacdo waa:
1. Guji Start oo raadi ereyga PowerShel l.
2. Midig ku dhufo Codsiga PowerShell , una fur sidii U orod sidii maamule hab.
3. Si aad u damiso Internet Explorer 11, waa inaad ku qortaa amarka hoos ku xusan:
4. Hadda taabo Gelida. Nooca ' Y ' si aad u tiraahdo Haa oo ku dhufo Gelida si aad u xaqiijiso falkaaga.
5. Dib u bilaw nidaamka marka hawsha oo dhami dhamaato.
Habka 3: Ka saar Internet Explorer 11 adoo isticmaalaya Maamul Tilmaamaha Shaqada
Hab kale oo fudud oo lagu uninstall Internet Explorer 11 ka Windows 10 waa iyadoo la isticmaalayo Maamul Astaamaha Hawlaha , kaas oo ku siinaya hab deg-deg ah oo aad browser-kan uga saarayso nidaamka. Si taas loo sameeyo, waa inaad raacdaa tillaabooyinka hoos ku qoran -
1. Riix Furaha Windows + I in lafuro Dejinta
2. Daaqadda Settings ka, aad sanduuqa raadinta oo ku qor: Maamul Astaamaha Hawlaha .
3. Liiska, ka raadi Internet Explorer 11 .
4. Guji Internet Explorer 11 ka dibna dhagsii Badhanka ka saar si aad uga saarto IE 11 nidaamkaaga.
Haddaba hadda waxa aad ka uninstalled Internet Explorer ka nidaamkaaga iyada oo la isticmaalayo dhammaan hababka kor ku xusan, haddii ay dhacdo in aad u baahan tahay in aad mar kale ku rakibo Internet Explorer nidaamkaaga. Waxaad u baahan tahay inaad raacdo tillaabadii aad samaysay habka 3:
5. Riix Windows Key + I si aad u furto Settings.
6. Daaqadda Settings ka, aad sanduuqa raadinta oo ku qor: Maamul Astaamaha Hawlaha .
7. Liiska, ka raadi Internet Explorer 11 .
8. Guji Internet Explorer 11 ka dibna dhagsii Ku rakib badhanka ku ku dar Internet Explorer 11 gudaha Windows 10.
Sida loo beddelo Layout kiiboodhka gudaha Windows 10
Windows 10 Talo: Sida Loo Joojiyo Galitaanka Internetka
Sida loo beddelo Username Account on Windows 10
Sida loo Customize Screensaver gudaha Windows 10
Waxaan rajeynayaa in tillaabooyinka kore ay ahaayeen kuwo waxtar leh. Hadda si fudud ayaad u samayn kartaa Ka saar Internet Explorer ka Windows 10 , laakiin haddii aad wali hayso wax su'aalo ah oo ku saabsan casharkan, fadlan xor u noqo inaad ku waydiiso qaybta faallooyinka.
Aditya waa xirfadle ku takhasusay tignoolajiyada macluumaadka iskiis u shaqeya wuxuuna ahaa qoraa tignoolajiyada 7dii sano ee la soo dhaafay. Wuxuu daboolaa adeegyada internetka, mobilada, Windows, software, iyo sida loo hago.